Ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft dia tantara mitohy amin'ny HP Lovecraft a la Diablo | Androidsis
Topazo maso ilay tranofiara misy an'i Tantara tsy fantatra momba ny Lovecraft, sisa tavela amin'ny tsiro izay atrehantsika karazana devoly avy any Blizzard, fa miaraka amin'ny mistery sy horohoro rehetra noho ny horohoron-tany mahatsiravina an'ny mpanoratra amerikana HP Lovecraft.
Lohateny izay tokony ho fantatrao ny fomba hanatonana azy amin'ny alàlan'ny kinova maimaimpoana ahafahantsika mizaha toetra amam-panahy sy ambaratonga roa. Noho izany dia afaka mankafy zavakanto pixel mahafinaritra isika, mistery be dia be ary izay rehetra RPG amin'ny Devoly miaraka aminy sari-tany midadasika, zavatra maro hakana amin'ny tany ary ny fifandonana amin'ireo biby goavam-be manimba amin'ny lafiny hafa. Lalao misy rivo-piainana mahafinaritra.
1 Ny rivotra iainana ao amin'ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft
2 Lalao maimaim-poana momba ny tantara an'ny Lovecraft
3 Kilalao toa ny Devoly
Ny rivotra iainana ao amin'ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft
Miatrika hetsika roguelite misy singa RPG maro izay manana ny Backstory mety indrindra: Ny tantara mahatsiravina an'ny HP Lovecraft. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miatrika fifangaroan-javatra voafantina tsara izahay mba hamoronana indray ny traikefa ananan'ireo nilentika tao anaty sofa ianao, makà sôkôla vitsivitsy ary apetaho amin'ny headphones anao mba handinihana lalao iray izay manome ny tena betsaka.
Raha efa nilaza ny Diablo izahay dia satria tsara tarehy ny fanaraha-maso. na dia trano-maizina voaforona kisendrasendra ka voatery manadihady amin'izy ireo amin'ny ankapobeny izy ireo isaky ny milalao ary amin'izay dia afaka manaraka ny kofehin'ity dia mampihoron-koditra mahatsiravina ity isika. Ao anatin'izany isika dia afaka hiady amin'ireo mpanabe, karazana biby goavambe avy amin'ny Myths, hanatsara ny fitaovantsika ary hitady famantarana sy fampahalalana momba ireo Ntaolo sy ireo Andriamanitra Andafy.
Lalao izay mamela antsika ho gaga hatramin'ny fotoana voalohany sy nanomboka Etsy ivelan'ny tranobe iray, miaraka amin'izany orana sy jiro izany Tsara toerana izy ireo, manome lovia mihoatra ny mahaliana ho an'ny saintsika mitady tsy milamina amin'ny traikefa lalao vaovao.
Lalao maimaim-poana momba ny tantara an'ny Lovecraft
Amin'ny dikan-teny maimaim-poana isika dia afaka milalao amina toetra iray sy ambaratonga roa ihany. Samy manana ny fahaizany avy ny olona tsirairay avy, noho izany ao amin'ilay kinova maimaimpoana dia tsy afaka mankafy an'io fahafaha-manao io fotsiny izahay. Manoro hevitra anao izahay hampiasa ny hitsambikina handalo sakana sasany, satria amin'ny fotoana voalohany dia mety ho somary misavoritaka ihany.
Ny toetra amam-panahy tsirairay dia manome làlana hanome antsika fanadihadiana samihafa hahitana tranga vaovao miaraka amin'ireo tantara miafina miandry antsika. Ah, amin'ny Espaniôla izy io, noho izany tsy misy fialan-tsiny farafaharatsiny mba hanandramana azy ary avy eo mandalo ny 9,95 € amin'ny traikefa mahatsiravina sy zava-miafina HP Lovecraft. Moa tarehimarika 5 total: ny mpitsikilo, ny profesora, ny mpamosavy, ny mpangalatra sy ny matoatoa. Samy manana ny fahaizany izy ireo raha ny amin'ny mpamosavy izay afaka teleport sy mamorona ampinga ranomandry sy afo.
Ny zava-drehetra amin'ity lalao ity dia vonona ny hamorona atmosfera manokana. Miresaka momba izany isika Tranon'ny Victoria, hopitaly, ala mikitroka miaraka amin'ireo foko very ary andian-tontolo iainana hafa izay hametraka ny fihenjanana mety mba hananantsika fotoana mahafinaritra amin'ny lalao tsirairay. Hihazakazaka amin'ny taloha ianao ary miresaka momba ny Great Cthulhu, Nyarlathotep, Dagon ary ny maro hafa.
Kilalao toa ny Devoly
ihany koa miaina ny lalao fantatsika avy amin'ny Diablo ianao. Mikarokaroka ireo lavaka mangitsokitsoka miaraka amin'io sari-tany io saika kopia avy amin'ny lalao Blizzard ary mamerina fahatsiarovana mahafinaritra be izany. Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny ady, toy ny fanisana miaraka amin'ny fetran'ny fahaizany mitondra zavatra. Azontsika atao ny manatsara ny fitaovam-piadiana, ny zavatra ary ny artifact, ary ny olona tsirairay dia samy manana ny azy avy. Tsy tokony hanadino ireo làlambe ihany koa isika ary handinika ny kofehy iraisana izay mitarika antsika amin'ny tantara iray tena miavaka.
Raha tsy maintsy manasongadina zavatra ara-teknika isika, ary natao peta-kofehy mba hitondra traikefa tsara dia izy ny habakabaka noforonina niaraka tamin'ny vokany hita maso, izay zavakanto pixel tsara, tontolo iainana manan-karena amin'ny zavatra sy ireo vokar-peo izay hametraka antsika amin'ny toerana marina. Ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft dia lalao niasa tena tsara izay napetraka ho iray amin'ireo specials izay tianay hilalao amin'ny alina orana na amin'ny alina Halloween aza; dia tsy ho very amin'izany andro izany.
Ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft's Untold dia tonga tamim-paharisihana ho lasa benchmark amin'ny lohateny mampatahotra ary noho ny maha roguelike azy ary manana ny HP Lovecraft mahafinaritra miaraka amin'ny tantarany, dia lasa iray amin'ireo lalao ankafizinay indrindra izany. Raha mila traikefa lehibe sy hafa ianao, aza hadino ny fotoana nifanarahana ary tsy ho tsapa ao am-paosintsika ireo 9,95 euro. SY miverina any Diablo izahay mba hahafahanao milalao azy amin'ny Android.
Ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft
Kanto lehibe amin'ny pixel
Toerana mahafinaritra miaraka amin'ny HP Lovecraft
Endri-tsoratra 5 samy hafa
Amin'ny minitra voalohany dia mety hihitsoka ianao raha tsy mianatra mitsambikina amin'ny zavatra
Developer: Lalao Blini
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny fahaizan'ny HP Lovecraft sy ny horohoron-tany mampihoron-koditra dia mahatratra ny Devoly amin'ny tantaram-pitiavan'i Lovecraft
Ny fanavaozana Windows 10 izao dia mamela anao hamaly ireo antso Android amin'ny PC-nao